बस चढ्न हिउँद कुर्नुपर्छ
काठमाडौं। शङ्खरापुर नगरपालिकाको नाङ्लेभारे अझै पनि विकासमा निकै पछि परेको छ। यहाँको पटाप र छापभञ्ज्याङ तामाङ वस्तीको बाहुल्यता रहेको बस्ती हो। यहाँका वासिन्दाले सहज रुपमा यातायात सेवा पाउन सकेका छैनन्।
यस्तै साँखु, जरसिंह पौवा हुँदै मेलम्ची पुग्ने सडकखण्डमा बर्खाको समयमा गाडी चल्दैन। अरुबेला पनि यो सडकको अवस्था उस्तै छ।
हिलो र खाल्टाखुल्टीले गाडी चलाउन मुस्किल छ। केराघारीका वासिन्दा सवारीसाधन प्रयोग गर्न एक घण्टा उकालो चढेर छापसम्म पुग्छन्।
स्थानीय वीरबहादुर तामाङ यातायातसँगै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीबाट समेत सेवा लिन सहज नभएको बताउँछन्। जहरसिंहपौवाबाट एक घण्टा हिँडेपछि पुगिने बस्ती हो, घट्टेकुलो। यहाँका वासिन्दाले यातायातका साधन प्रयोग गर्न हिउँदको समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
गाउँघरमा कोही बिरामी हुँदा बोकेरै जहरसिंहपौवा पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । “काठमाडौँ भनेर के गर्नु? बिरामीलाई बोकेरै अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ । सडक छ गाडी चल्दैन,” स्थानीय जीतबहादुर तामाङले भने।
वडाध्यक्ष सन्तबहादुर वाइवा घट्टेकुलोसम्मको सडक मर्मत गरिने बताउँछन्। प्राकृतिकरूपमा रमणीय जहरसिंह पौवासम्म पुग्न निकै कठिन हुन्छ। हिलो र धुलोका कारण पर्यटक हैरान हुने गरेका छन्। चावहिल–जहरसिंहपौवा सडकखण्डमा ठाउँठाउँमा खाल्टाखुल्टी छन् । “भय र त्रासमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ,” सो सडकखण्डमा यात्रा गर्दै आएका सन्तोष चौलागाईंले भने।
साँखु बजारबाट तीन किलोमिटर उक्लिने बित्तिकै छापभञ्ज्याङका वस्तीमा पुगिन्छ। लप्सेफेदी र नाङलेभारेमा बर्खाको समयमा बस चल्दैन। “बस चढ्न हिउँदनै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने।
साँखुबाट मेलम्चीसम्मको सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। कालोपत्रे गरिएको ६ महिना बित्न नपाउँदै सबै उप्कियो। यहाँ विद्यालय पुग्न एक घण्टा उकालो चढ्नुपर्ने स्थानीयवासी गोमा तामाङ बताउँछन्। “हिँड्न नसक्दा कतिपय बालबालिका विद्यालय जानै मान्दैनन्,” उनले भने। रासस
प्रकाशित: आईतबार, असोज ५, २०७६ १३:४०
“काठमाडौँ भनेर के गर्नु ? बिरामीलाई बोकेरै अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ, सडक छ गाडी चल्दैन ।”